Soo-saareyaasha Nidaamka Khaanadda & Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad Nidaamka Khaanadda Shiinaha
Jidh jilicsan oo Caato ah oo labalaab ah oo gidaar ah
Hordhac:Jilibka khafiifka ah ee khafiifka ah ee khafiifka ah darbigiisa darbijiifka badanaa wuxuu u isticmaalaa jikada & qolka musqusha Noocan ah jiidaha jilicsan ee khafiifka ah ee laba jibaaran dariiqa hoose wuxuu isticmaalaa slide khaanad hoose oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M04.86
150mm khaanad dusheeda jiitaa khafiif ah khaanadaha jikada
Hordhac:150mm khaanad dusheeda oo khafiif ah oo khafiif ah khaanadaha jikada oo siibiya ayaa badanaa loo isticmaalaa jikada & qolka musqusha. Noocan ah jiidaha jilicsan ee khafiifka ah ee laba jibaaran dariiqa hoose wuxuu isticmaalaa slide khaanad hoose oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M04.150
182mm dherer jilicsan sanduuqa khafiifka ah ee khaanadda khaanadaha khaanadaha birta
Hordhac:182mm dherer jilicsan oo khafiif ah oo dhow oo khafiif ah sanduuqa jikada khaanadaha khaanadaha khaanadaha badanaa waxay u isticmaalaan jikada & armaajooyinka musqusha. Noocan ah jiidaha jilicsan ee khafiifka ah ee laba jibaaran dariiqa hoose wuxuu isticmaalaa slide khaanad hoose oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M04.182
118mm nidaamka khaanadda caatada ah ee khaanadda khaanadda birta ah
Hordhac:Nidaamka khaanadda khafiifka ah ee dhalada khaanadda biraha ee 118mm badanaa loo isticmaalo jikada & armaajooyinka musqusha. Noocan ah jiidaha jilicsan ee khafiifka ah ee laba jibaaran dariiqa hoose wuxuu isticmaalaa slide khaanad hoose oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M04.118
Nidaamka dhaqdhaqaaqa dhow ee jilicsan ee aamusnaanta laba jibaaraha darbiga laba jibaaran
Hordhac:Nidaamka dhaqdhaqaaqa dhow ee aamusnaanta jilicsan ee laba jibaaraha darbiga badanaa wuxuu u isticmaalaa jikada & armaajooyinka musqusha. Noocaan laba jibaaraha ah ee laba jibaaran dariiqa wuxuu isticmaalaa orodyahanka khaanadda qarsoon ee leh qalabka. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M01.199
Nidaamka khaanadda khaanadda ee khaanadaha birta ah iyo ka bixitaannada siman ee aamusan
Hordhac:Nidaamka sanduuqa khaanadda ee khaanadaha birta ah iyo ka bixitaannada siman ee aamusnaanta badanaa loo isticmaalo jikada & qolka musqusha Noocan ah jikada biraha khaanada biraha jikada ku jirta waxay isticmaalaan slide khaanadda hoose ee dhalada oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M01.86
Nidaamka Khaanadda Birta Ah ee Birta Labaad Loo Dhigo
Hordhac:Nidaamka khaanadda labalaabidda ee birta derbiga laba jibaaran ayaa badanaa loo isticmaalaa jikada & qolka musqusha Noocan ah jikada biraha khaanada biraha jikada ku jirta waxay isticmaalaan slide khaanadda hoose ee dhalada oo leh qalab. Muuqaalku waa bogagga ka shaqeynaya aamusnaan la'aan iyo iswaafajin dheeri ah oo buuq la'aan. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Nidaamka Khaanadda Box Double Double Slim
Hordhac:Nidaamka khaanadda sanduuqa khafiifka ah ee gidaarka laba-geesoodka ah ayaa loo adeegsadaa jikooyinka & musqusha. Noocan ah khaanadda khafiifka ah ee khaanadda khafiifka ah waxay isticmaashaa slide khaanad hoose oo khafiif ah oo leh qalab quful leh. Sidoo kale waad beddeli kartaa inaad adeegsato riixitaanka si aad u furto isbaaro qarsoon oo khaanadda hore leh. Muuqaalka sheygan ayaa ah jihada hoose ee khaanadda labaduba u isticmaali karaan khaanadda birta iyo khaanadda alwaax. Kuu keydin karaa qiimaha alaabada adiga. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M02.89
Nidaamka Khaanadda Xidhan ee Aamusan
Hordhac:Nidaamka khaanadda jiifka jilicsan ee aamusnaanta badanaa waxaa loo isticmaalaa qolka jikada & musqusha. Noocan ah Aaladda aamusnaanta khafiifka ah ee aamusnaanta aamusnaanta waxay adeegsataa slide khaanad jilicsan oo hoose oo hoose oo leh qalab quful leh. Sidoo kale waad beddeli kartaa inaad adeegsato riixitaanka si aad u furto isbaaro qarsoon oo khaanadda hore leh. Muuqaalka sheygan ayaa ah jihada hoose ee khaanadda labaduba u isticmaali karaan khaanadda birta iyo khaanadda alwaax. Kuu keydin karaa qiimaha alaabada adiga. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M02.185
Caato ah Khaanadaha Birta Khaanadda Khaanadaha
Hordhac:Caagga khafiifka ah ee khaanadda khaanadda biraha ku siibtaan sida caadiga ah waxay u isticmaalaan qolka jikada & musqusha Noocaan ah khaanadaha dhalada khaanadda biraha khafiifka ah waxay isticmaalaan aaladda aamusnaanta dhow ee hoose ee hoose ee qalabka wax lagu xiro. Sidoo kale waad beddeli kartaa inaad adeegsato riixitaanka si aad u furto isbaaro qarsoon oo khaanadda hore leh. Muuqaalka sheygan ayaa ah jihada hoose ee khaanadda labaduba u isticmaali karaan khaanadda birta iyo khaanadda alwaax. Kuu keydin karaa qiimaha alaabada adiga. Haddii aad xiisaynayso nidaamka khaanadda khafiifka ah ee khafiifka ah, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Qaab No.: M02.121